Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Daaweynta Neefsashada ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Qalabka Daaweynta Neefsashada
Qalabka Daaweynta Neefsiga waxaa loola jeedaa bukaanada aan awoodin inay iskood u neefsadaan si ay u dhamaystiraan ficilka soo saarista carbon dioxide iyo neefsashada ogsijiinta, inta lagu jiro ogsajiinta, habka jireed ama qalabka neefsashada ee macmalka ah ayaa loo isticmaali doonaa daaweynta. Dareen cidhiidhi ah, daryeelka neefsashada waxaa loola jeedaa dhammaan habka daryeelka caafimaadka jireed iyo maskaxeed ee bukaanka iyo qoysaskooda marka bukaanku uusan ka saari karin qalabka neefsashada macmalka ah si ku meel gaar ah.
Qalabka Daaweynta Neefsiga waa xirfad cusub oo caafimaad, kaas oo shaqadiisu tahay in la baaro, daaweeyo iyo kalkaalisada bukaanada qaba wax-qabad la'aanta wadnaha sambabada ama cillad aan caadi ahayn iyadoo ay hogaaminayaan takhaatiirta.
Qalabka Daaweynta Neefsashada waxaa ka mid ah bixinta hawo-qaadista iyo daaweynta ogsajiinta ee bukaannada aadka u xanuunsan; Isticmaalka iyo la socodka gaasaska caafimaad ee kala duwan; Atomization kala duwan iyo daaweynta aerosol iyo la socodka; Soo kicinta wadnaha sambabada iyo isticmaalkeeda iyo dayactirkeeda; Baxnaaninta sambabada; Hababka kale ee farsamada, sida falanqaynta gaaska dhiigga, la socodka shaqada sambabada, daaweynta qolka oksijiinta hyperbaric, iwm.
Oximeter-ka garaaca: Tusmooyinka cabbiraadda ugu muhiimsan ee oximeter waxay ahaayeen heerka garaaca wadnaha, qoyaanka oksijiinta iyo index perfusion (PI). Dheefanka ogsijiinta (SpO2 ee gaaban) waa mid ka mid ah xogta aasaasiga ah ee muhiimka ah ee daawada kiliinikada. Dheefta Ogsajiinta dhiigga waa boqolkiiba isku darka O2 mugga ilaa mugga O2 ee wadarta mugga dhiigga.
Maaskarada Ogsajiinta: Maaskarada Ogsajiinta waa aaladaha ka gudbiya ogsajiinta taangiyada una gudbisa sambabada. Maaskaro oksijiin ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo sanka iyo afka (maaskarada oronasal) ama wejiga oo dhan (maaskaro buuxa). Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa xaqiijinta caafimaadka aadanaha iyo ilaalinta badqabka duuliyayaasha iyo rakaabka diyaaradda.
Xakamaynta Ogsajiinta: Dareemka socodka ugu weyn, xisaabinta socodka laba qaybood, waxay qabataa tignoolajiyada tijaabada mitirka ee ugu dambeysay, soo bandhigta beddelka sare ee ajnabiga ah, xarfaha Shiinaha ee dareeraha ah, oo ay xisaabiyeen tiro injineero sare ah oo wata qalabka wax lagu ogaado, oo si gaar ah loogu talagalay isbitaalka waaxda cabbiraadda ogsijiinta, oo hadda lagu xalliyo cabbirka qulqulka faragelinta korantada, Socod yar (marka hal qof qaadanayo ogsijiinta) ma bilaabi karo, ama qulqulka weyn lama cabbiri karo. Iyada oo kala duwan oo ballaaran, saxsanaan sare, cabbir qurux badan oo qurux badan, rakibid fudud oo ku habboon, ma jirto farsamoyaqaan, si sahlan loo akhriyo, nolol dheer oo adeeg ah, iyo sifooyin kale oo badan. Waxay noqotay qaybta isbitaalka, saldhiga oksijiin......
Mitirka socodka Ogsajiinta iyo nidaamiyaha
Meter Flow Ogsajiinta iyo Nidaamiyaha: Dareemka socodka ugu weyn, xisaabinta socodka laba qaybood, waxay qabataa tignoolajiyada tijaabada mitirka ee ugu dambeysay, soo bandhigta transducer-ka sare ee ajnabiga ah, muujinta dareeraha dareeraha ah ee jilayaasha Shiinaha, oo ay qiimeeyeen tiro injineero sare ah oo leh qalab wax lagu baaro, gaar ahaan loogu talagalay waaxda cusbitaalka ee cabbiraadda oksijiinta, oo lagu xalliyo wakhtiga xaadirka ah cabbirka qulqulka faragelinta korantada, Socod yar (marka hal qof qaadanayo ogsijiinta) ma bilaabi karo, ama qulqulka weyn lama qiyaasi karo. Iyada oo kala duwan oo ballaaran, saxsanaan sare, cabbir qurux badan oo qurux badan, rakibid fudud oo ku habboon, ma jirto farsamoyaqaan, si sahlan loo akhriyo, nolol dheer oo adeeg ah, iyo sifooyin kale oo bad......
Oxygenerator: Ogsajiin dhaliyaha waa nooc ka mid ah mishiinada soo saara ogsijiinta. Mabda'adeedu waa in la isticmaalo tignoolajiyada kala-soocidda hawada. Hawada marka hore waxaa lagu cadaadiyaa cufnaanta sare ka dibna lagu kala soocaa heerkul gaar ah farqiga u dhexeeya dhibcaha isku dhafka ah ee qaybaha hawada, ka dibna loo kala saaro ogsijiinta iyo nitrogen iyadoo la nadiifinayo. Guud ahaan, sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa soo saarista ogsijiinta si ay dadku ugu yeeraan mashiinka oksijiinta. Sababtoo ah ogsijiinta iyo nitrogen ayaa si weyn loo isticmaalaa, koronto dhaliyaha oksijiinta ayaa si weyn loogu isticmaalaa dhaqaalaha qaranka. Gaar ahaan dhanka biraha, warshadaha kiimikada, batroolka, difaaca qaranka iyo warshadaha kale ayaa inta badan laga isticmaalaa.
Hawo-mareenka caafimaadka: dhaliye Ogsajiin waa nooc ka mid ah mishiinada soo saara ogsijiinta. Mabda'adeedu waa in la isticmaalo tignoolajiyada kala-soocidda hawada. Hawada marka hore waxaa lagu cadaadiyaa cufnaanta sare ka dibna lagu kala soocaa heerkul gaar ah farqiga u dhexeeya dhibcaha isku dhafka ah ee qaybaha hawada, ka dibna loo kala saaro ogsijiinta iyo nitrogen iyadoo la nadiifinayo. Guud ahaan, sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa soo saarista ogsijiinta si ay dadku ugu yeeraan mashiinka oksijiinta. Sababtoo ah ogsijiinta iyo nitrogen ayaa si weyn loo isticmaalaa, koronto dhaliyaha oksijiinta ayaa si weyn loogu isticmaalaa dhaqaalaha qaranka. Gaar ahaan dhanka biraha, warshadaha kiimikada, batroolka, difaaca qaranka iyo warshadaha kale ayaa inta badan laga isticmaalaa.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Daaweynta Neefsashada oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Daaweynta Neefsashada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Daaweynta Neefsashada la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.